Umbiko weSoDA 2013 - Umqulu 2 | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 6, 2013 NgoLwesibili, Novemba 5, 2013 Douglas Karr
Uhlelo lokuqala lwe- Umbiko weSoDA ka-2013 manje sekusondela ukubukwa nokulanda okungaba ngu-150,000!
Ingxenye yesibili yokushicilelwa manje isilungele ukubukwa. Lolu hlobo lufaka inhlanganisela ekhangayo yezingcezu zobuholi bokucabanga, izingxoxo eziqondayo nomsebenzi owusizo wangempela owenzelwe izinhlobo eziphezulu ezifana neNike, iBurberry, i-Adobe, i-Whole Foods, i-KLM ne-Google. Abanikeli bafaka ababhali bezivakashi abaziwayo abavela kuma-blue-chip brand, ama-consultant kanye nama-start-up amasha, kanye nezikhanyisi ezivela ezinkampanini ezingamalungu e-SoDA emhlabeni wonke.
Ubungako bokuqukethwe obuqukethwe kuleli volumu buyisibonelo futhi. Ubulungu be-SoDA's elite, ophathina nabanye abaholi bemboni bahlinzeka ngemininingwane yabo yakamuva ekwakhiweni kwedijithali nemingcele efiphele yokukhangisa kwedijithali, insizakalo yamakhasimende nokwakhiwa kwemikhiqizo. Tony Quin (uSihlalo weBhodi le-SoDA kanye ne-CEO ye-IQ).
Kule volumu, i-SoDA ibuye yaba nenhlanhla yokusebenza nozakwethu i-AOL ukuqala ezinye zezinto ezitholakele ocwaningweni lwayo lobunikazi lokwehlisa amafasitela okuthenga kanye nomphumela wokuphindaphinda wokusetshenziswa kwe-smartphone kulezo zikhathi ezincishisiwe zokwenza izinqumo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo nezinsizakalo .
Mayelana ne-SoDA - I-Global Society for Digital Marketing Innovators: I-SoDA isebenza njengenethiwekhi nezwi labosomabhizinisi nabasunguli bezinto ezintsha emhlabeni wonke abakha ikusasa lokumaketha kanye nokuhlangenwe nakho kwedijithali. Amalungu ethu (ama-ejensi aphezulu edijithali nezinkampani zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme) eza ngesimemo kuphela nesichotho esivela emazweni angama-25 + kuwo wonke amazwekazi amahlanu. I-Adobe ngumxhasi osungula inhlangano. Abanye ophathina bezinhlangano bahlanganisa iMicrosoft, Econsultancy ne-AOL.
Tags: Isoda yango-2013Umbiko wesoda ka-2013adobeI-AOLBurberryukucubungulaI-Global Society for Digital Marketing InnovatorsGoogle +IQKLM-Microsoftnikeumbiko wesodaUTony QuinWhole Foods